एनसेललाई २५ अर्ब नतिराउन यी माफियाको ‘डेन्जर’ चलखेल::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
एनसेललाई २५ अर्ब नतिराउन यी माफियाको ‘डेन्जर’ चलखेल
काठमाडौं – सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ मा एनसेल प्रालिका नाममा ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि उक्त रकम नतिर्न एनसेलले सर्बोच्चमा मुद्दा हालेर अल्झाउन खोजेको छ । दरपीठ गर्नुपर्ने रिट सर्वोच्च अदालतले किन दर्ता ग¥यो भन्ने बिषय कानुनी क्षेत्रमै गम्भीर प्रश्नका रुपमा उठेको छ ।
उनका अनुसार आयकर ऐन २०५८ को दफा ११४, ११५ र र ११६ ले प्रशासकीय पुनरावलोकन भनेको छ । कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । महानिर्देशकले हेर्ने हो । त्यहाँबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरणमा जाने हो । तर एकै पटक दुई तहका न्यायिक निकायलाई ओभरटेक गरी एनसेल सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको छ ।आजको युनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयअनुसार एनसेललाई सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन ताकेता गरिएको गरिएको थियो । तर, त्यो समय मंगलबार सकिनु अघि एनसेल पुनः सर्वोच्चमा गएको हो । करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर विवरणमाथि प्रश्न उठाउँदै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । लाभकर नतिर्ने दुरासयका साथ रहस्यमय ढंगले रिट दर्ता भएपछि अहिले मुलुकभर एनसेल बहिस्कार अभियान शुरु भइसकेको छ भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको दोहोरो भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउन थालिएको छ । पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले गरेको आदेश बिपरीत किन रिट दर्ता भयो ? भन्ने बारेमा कानुन व्यवसायीहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । पाँच सदस्यीय इजालसले गरेको फैसलाबिरुद्ध परेको रिटमा अब ७ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्छ ।
स्रोतका अनुसार सर्वोच्चमा एनसेलको तर्फबाट विचौलियाको भूमिका खेली रिट दायर गर्नमा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष एवम् टेलिकम क्षेत्रमा माफियाका रुपमा परिचित उपेन्द्र महतोको ठूलो हात रहेको छ । एनसेलमा नेपालीतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरकी भावना श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यले महतोमार्फत् सर्वोच्चमा चलखेल गरेको स्रोत बताउँछ । महतोले एनसेलको मुद्दा मिलाउनका लागि आफ्ना एजेन्ट दिपक तिमिल्सिनामार्फत् सर्वोच्चलाई प्रभावमा पार्न खोजेको बुझिएको छ । जबकि यसअघि एनसेललाई लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गराउन पनि महतोले नै भूमिका निभाएका थिए । सतिशलाल आचार्यलाई देखाउन उनले चलखेल नै गरी एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गराएका थिए ।
महतोलाई आफूले जे चाह्यो त्यो गर्नसक्छ भन्ने आभाष दिनु थियो । एनसेललाई लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गराएर उनले त्यो देखाए । एक्जियटासँग सुरुमा महतोले डिल गरेका थिए । पछि सतिसलालले लोकमानसिंह कार्कीलाई हातमा लिएर एक्जियटालाई एनसेलमा लगानी गर्न भित्र्याएपछि महतो उनीसँग बदला लिने उपयुक्त ताकमा थिए । चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन कान्तिपुर पत्रिका भरपूर उपयोग गरे । राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनले एनसेलको लाभकर असुली हुनुपर्ने फैसला गराउन दबाब र प्रभाव पारे । राणालाई पनि एनसेलको लाभकरको फैसला गरेर सेलिब्रेटी बन्नु थियो ।
त्यही भएर एनसेलको लाभकर असुली गर्न आदेश दिए । तर, महतोको शरणमा सतिसलाल परेपछि अहिले फेरि रिट दायर गरी १४ अर्ब मात्र लाभकर तिर्नेगरी सेटिङ मिलाउन महतोले नै गरेको स्रोतको दाबी छ । ३५ अर्बको पेरीफेरीमा मात्र लाभकर तिर्नेगरी सेटिङ मिलाएर रिट दायर गरिएको छ । २३ अर्ब तिरिसकेको र अब १४ अर्ब मात्र तिर्न एनसेल लागेको छ ।